Costa Rica: Nampihitsoka ny olom-pirenena sy ny mpitsidika ny Horohorontany 6.2 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2009 19:24 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Français, Italiano, Español, English
Nasehon'ny sehatra famahanana madinidnika Twitter indray ny halakin'ny vaovao aely manerantany, ka ny tranga eto dia ny horohorontany 6.2 izay tsapa nanerana an'i Costa Rica iray manontolo, nanana ny ivony tao Vara Blanca, 35 Km miala ny renivohitr'i San Jose. Nivoaka ny trano fiasana avokoa ny olona tao an-drenivohitra sy ny tao amin’ny vohitra mpifanila vody rindrina tao Alajuela sy Heredia tao aorian’ny hotakotaka, toy izany koa ireo polisy nanakana ny arabe tao afovoan-tanàna noho ny ahiahy hianjeran'ny trano efa antitra. Tamin'ny alalan'ny Twitter no ahitantsika ny tatitra voalohany ny horohorontany izay nosoratan’ny @reiterstahl voafehy anaty teny iray ho fahatsapana ny hovitrovitra: HOVITRRRRRA!!!!!. Vetivety dia niely sy nanjaka avy amin’ny Twitter ny marika #cr sy #temblor
Hipoka ny fifandraisana an-telefonina taorian’ny horohorontany, tapaka nandritra ny ora vitsivitsy ny herinaratra tamin’ny faritra maromaro. Voatery niankina tamin’ny loharanom-baovao mirazotra (parallele) toy ny famahanam-bolongana mitantara mivantana CoverItLive izay avelan'ny gazety La Nacion hojerena ny olona, mamaky sy mamaly izay voalazan'ny vohikala.
Loharanom-baovao hafa ihany koa ny an'ny mpanao gazety @amerliarueda izay manana kaonty ao @ Twitter ka mamoaka ny vaovao amina toe-javatra mahatsiravina tahaka itony amin'izay olona mifandray aminy. Ao amin’ny Peace Lodge sy La Paz Waterfall Gardens (zaridainan'ny riandranon'i La Paz water Fall) dia 200 farafahakeliny ny mpiasa sy mpitsidika nihitsoka sy tssy afa-nifandray tamin'ny hafa tao @ La Paz Peace Lodge sy ny zaridainan'i Waterfall (riandrano) izay potika tanteraka araka ny nolazain'ny mpiasa iray nifandray tamin’I Amelia Rueda na dia tsy nisy aza ny aina nafoy. Azonao henoina sy vakiana tsara ireo fanadihadiana momba io horohoron-tany io ao amin’ny blaogin'i Amelia, ary koa ny tatitra farany momba ireo helikoptera tsy miankina naka vola mitentina 3USD $1400 tamin'ireo mpizaha tany mba hamonjena azy ireo hiala ny toerana iharan’ny loza.
@fusildechispas kosa mampahalala aoao antsika ao amin'ny twitter-ny sy ny blaoginy ihany koa, izay mampiandravandra antsika amin'ny alalan'ny horonan-tsary (video) ny fahapotehan'ny tranoiray ao afovoan-tanànan'i San Jose
Ivelan’ny vohitra, akaiky ny tanan’ny Vara Blanca, Poasito, Cinchona sy Fraijanes, dia voalaza fa namoizana tovovavy anankiroa sy fianakaviana iray miisa olona dimy ny fihotsahan'ny tany, ary ahiahiana rehefa miposaka ny masoandro dia ho betsaka ireo faty mety ho hita. Betsaka ny fahasimbana, toy ireo trano mijoalajoala nianjera, ny arabe izay nanjavona noho ny fihotsahan’ny tany ka nety nanototra fiara, fiarakaretsaka ary trano. Nitondra safo-drano ho an’ny renirano ihany koa ny horohoron-tany noho ny fotaka sy ny fako isan-karazany (matiere organique) nivarina tao anatiny. Mbola sarotra ny haminavina ireo fahasimbana avy amin’ny horohoron-tany sy ny safo-drano ary ny fihotsahan’ny tany araka ny filazan'ny vokovoko mena Kostarikana.
Efa nametraka saritany Google mampiseho ireo tatitra momba ny fahasimbana i JaguardelPlatanar . Mba hijerana ny saritany farany, dia tsindrio eto azafady.
Efa natsofok’ireo mpikirakira maro dia maro tao amin’ny YouTube ihany koa ireo horantsary voaray avy amin’ny Televiziona mba hanomezana fampahafantarana ho an’ny hafa izay tsy afaka mahita fantsona (canal) avy ao anatin’ny televiziona izay misy ny toe-javatra taterina.
Voavinaviana fa rahampitso satria mbola ho hita ny fiantraikan'ny voina dia ho betsaka ny fiara sy ny trano ho tsikaritra ny fahapotehany ary ho maro kokoa ny isan'ny niharan-doza fantatra.
Nandefa email ho ahy ny Cindy Banks, tompon’ny Peace Lodge sy La Paz Waterfall Gardens, manazava nkokoa ny mombamomba ny trano fandraisam-bahiny mihaja. Tsy simba akory ny trano, nieren-doza ireo biby ary manantena izy ireo fa hiverina amin’ny laoniny sy hihatsara izany afaka volana vitsivitsy. Soa ihany fa tsy nisy aina nafoy tao amin’ny tranom-bahinin’izy ireo ary ny kitro-tongotra folaka no ratra hita hoe ratsy indrindra. Nomarihany ihany koa fa na dia hoe tsara vitana aza izy dia maro ireo fianakaviana no very trano sy havana teo amin’ny mpiray monina ary mametraka zotra ao amin’ny tranokalany izy ireo mikasika ny fanomezana azonao omena ireto fianakaviana tra-boina ireto.